General - Creativos Online | Creativos Online (Pejy 2)
Raha mitady endri-tsoratra ho an'ny ankizy ianao dia anao ity publication ity, satria ny fitambaran'ny tsara indrindra no atolotray ho anao.
Ohatra amin'ny logos an-tsekoly
Raha miatrika fandrafetana logo an'ny sekoly ianao, ato amin'ity publication ity dia mitondra ohatra samihafa izahay mba hanentanana anao.
Ahoana ny fomba hanatsarana ny GIF
Ny famoronana GIF tonga lafatra dia mbola tsy mora loatra tamin'ity lesona tsotra entinay ho anao ity. Amin'ity lahatsoratra ity dia hasehontsika anao ny fomba hanatsarana ny GIF
logos ho an'ny bara
Tena malaza amin'izao fotoana izao ny logos orinasa. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia manome hevitra sy toro-hevitra ianao mba hamolavola ny tsara indrindra ho an'ny bar-nao.
logo metaly mavesatra
Fantatrao ve ny tantara ao ambadiky ny logos amin'ny karazana metaly mavesatra? Ato amin'ity lahatsoratra ity dia manazava ny fomba hamolavola ny anao manokana izahay.
Modely hanoratana fomba fahandro ho an'ny Word
Tianao ve ny hanana ny fomba fanaonao amin'ny fomba milamina sy amin'ny endrika tsara? Eto izahay dia mamela anao modely hanoratana fomba fahandro ho an'ny Word.
Signage amin'ny design
Anisan'ny fiainantsika ny famantarana ary mitarika antsika. Amin'ity lahatsoratra ity dia hazavainay ny fomba nahaterahan'ny signage amin'ny famolavolana, sy ny asany.
Mila hevitra vitsivitsy hanombohana mampiasa litera ve ianao? Ireto misy ohatra momba ny litera hanampy anao.
Misy karazana logo samy hafa, samy manana ny toetrany sy ny endriny samihafa. Amin'ity lahatsoratra ity dia hazavainay aminao izy ireo.
Misy marika, izay mampiavaka ny endri-tsoratra. Amin'ity lahatsoratra ity dia asehoy anao ny ohatra sasantsasany amin'ny marika typografika tsara indrindra.
Misy logo misy endrika geometrika. Ato amin'ity lahatsoratra ity, asehoy anao ny sasany amin'ireo logo telozoro tsara indrindra amin'ny famolavolana.
Maro ny refin'ny taratasy misy. Amin'ity lahatsoratra ity dia hojerentsika ny habe rehetra, ary hiresaka momba ny habe b5 isika.
Nanao tantara teo amin'ny tontolon'ny famolavolana i Paul Rand, hany ka tonga eto izahay mba hilaza aminao ny sasany amin'ireo endrika sy fango tsara indrindra.
Manafina tantara iray ao amin'ny logo ihany koa ilay vondrona mozika malaza. Ato amin'ity lahatsoratra ity, asehoy anao ny tantarany sy ny antony nanaovana azy.
Mitombo isan'andro ny tontolon'ny lamaody. Amin'ity lahatsoratra ity dia asehoy anao ny sasany amin'ireo t-shirt tsara indrindra, avy amin'ny marika lehibe sasany.
Ny fandrafetana sy ny famaritana marika dia anisan'ny ampianarinay anao amin'ity lahatsoratra ity. Hazavainay hoe inona ny rafitra marika.
Ahoana ny fametrahana italics amin'ny Instagram
Raha mbola tsy hainao ny mametraka sora-mandry ao amin'ny Instagram dia vintana ianao satria amin'ity lahatsoratra ity dia hilaza aminao ny fomba hanaovana izany izahay.
Ireo mpanao sary an-tsary hojerena
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia hitondra anao ny fifantenana ny mpanonta sary isan-karazany izay tsy azonao hadinoina.
Inona ary ny fomba hanaovana fanzine
Amin'ity publication ity dia hampianatra anao ny atao hoe fanzine avy amin'ny scratch izahay ary misy lohahevitra maimaim-poana.
Studios de design espaniola izay tianao hiasana
Raha te-hahafantatra ny studio 9 tsara indrindra amin'ny famolavolana espaniola ianao, ato amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny zava-drehetra momba ny tsirairay amin'izy ireo.
Ohatra Moodboard hanentanana anao
Ireo ohatra ao amin'ny solaitrabe ho hitanao ato amin'ity publication ity dia ho fitaomam-panahy ho an'ny fizotranao famoronana.
Instagram Illustrators Tsy azonao adino
Amin'ity famoahana ity dia afaka mahita fanangonana kely amin'ny mpanao sary Instagram izay tsy tokony ho diso ianao.
Ahoana no hanaovana logo multicolor
Raha te hamorona logo maro loko ao amin'ny Illustrator ianao, ato amin'ity lahatsoratra ity dia hazavainay ny fomba hanaovana izany haingana sy mora.
Inona no ilaina mba hahazoana dokam-barotra famoronana
Amin'ity lahatsoratra ity, manampy anao hianatra momba ny dokam-barotra famoronana izahay ary hampiseho anao ohatra samihafa hanentanana anao.
boky misy fonony tsara tarehy
Mila aingam-panahy hamoronana fonony ve ianao? Eto izahay dia mampiseho anao ny sasany amin'ireo boky misy fonony tsara tarehy afaka manampy anao.
Fantatrao ve ny endrika sary tsara indrindra misy? Fantaro hoe firy ary iza no tsara indrindra amin'ny fitazonana ny kalitao.
Fanoharana feminista mameno ny arabe sy ny tambajotra amin'ny hafatr'izy ireo
Fantaro ireo fanoharana feminista izay mameno ny arabe sy ny tambajotra sosialy amin'ny hafatra tena manan-danja eo amin'ny fiaraha-monina ankehitriny.
Tsy hainao ve ny mitambatra loharano roa sy mitambatra tsara? Jereo ireto fitambaran-tsoratra ireto izay azo antoka fa hanome hevitra anao.
Helvetica dia nohavaozina ary teraka, Helvetica Now
Helvetica, dia novaina taorian'ny taona maro nisian'ny tantara ho lasa Helvetica Now vaovao, ary lazainay aminao izay rehetra tokony ho fantatrao.
Ahoana ny fomba fanaovana GIF ho an'ny Instagram
Te hanao gif ho an'ny Instagram ianao ary tsy fantatrao ny fomba hanaovana azy. Aza manahy, amin'ity famoahana ity dia manome anao ny torohevitra tsara indrindra izahay.
Modely amin'ny tantaran'ny Instagram
Tianao ve ny môdely tantara Instagram hampisongadina ny endrikao? Eny ary, mamela safidy vitsivitsy izahay hanatrarana izany. Jereo ireo!
Dokam-barotra tamin'ny taona 80
Nidina teo amin'ny tantara ny dokambarotra tamin'ny taona 80. Noho izany, amin'ity lahatsoratra ity dia asehoy anao ny sasany amin'ireo doka tsara indrindra amin'ny fotoana.
Misy marika, izay maneho tanteraka ny tontolon'ny lamaody. Amin'ity lahatsoratra ity dia manazava ny tantaran'ny logo malaza Lacoste izahay.
Tantaran'ny logo Netflix
Inona no fantatrao momba ny tantaran'ny logo Netflix? Eto izahay dia mijery ireo sary marika samihafa amin'ity sehatra ity.
Inona no tantara manafina ny logo Doritos
Midira ary fantaro ny tantara ao ambadiky ny logo Doritos, ary ankafizo ny fivoaran'ny sarin'ny marika.
Ahoana ny fomba fanaovana zana-tsipìka amin'ny Adobe Photoshop
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia hanome anao ny fanalahidy hanintonana zana-tsipìka amin'ny Photoshop izahay ary hianatra momba ny karazana rehetra azonao atao.
Ny programa tsara indrindra hanovana horonan-tsary
Ny fanitsiana clip dia tena mora amin'ny programa sasany misy ankehitriny. Ato amin'ity lahatsoratra ity, asehoy anao izy ireo ary hazavainay aminao.
Ohatra amin'ny boky torolalana momba ny maha-orinasa
Ny fanolorana marika dia natao tamin'ny alàlan'ny boky momba ny maha-izy azy. Ato amin'ity lahatsoratra ity, asehoy anao hoe inona izy ireo ary ohatra vitsivitsy.
Inona no tantara ao ambadiky ny logo Lego?
Tsy fantatrao ve ny tantara ao ambadiky ny logo LEGO? Nolazainay aminao izany amin'ity famoahana ity momba ny marika.
Aiza no ahitana ny litera cursive tsara indrindra
Raha mitady litera cursive kanto ianao dia holazainay aminao hoe aiza no hahazoana azy ary iza no tsara indrindra azonao ampiasaina.
ny fomba hanaovana ny storyboard
Raha mbola tsy hainao ny manao solaitrabe, ato amin'ity lahatsoratra ity dia hampianatra anao tsikelikely izahay ary hampiseho ohatra vitsivitsy hanampy anao.
Mpamorona sary espaniola manana tantara
Ny famolavolana sary dia manana mpanakanto mahay, ato amin'ity famoahana ity dia miresaka momba ny fito amin'ireo mpamorona sary espaniola lehibe teo amin'ny tantara isika.
Ahoana no hanaovana teny filamatra
Ny teny filamatra dia anisan'ny fanentanana dokam-barotra maro. Ato amin'ity lahatsoratra ity, hasehontsika anao ny fomba famolavolana iray, ary inona no dingana tokony harahina.
Ahoana ny fomba hamoronana sary Duotone Effect amin'ny Photoshop
Raha mitady hanome endrika hafa ny sarinao ianao, ato amin'ity lahatsoratra ity dia hampianatra anao ny fomba hamoronana sary misy effet duotone ao amin'ny Photoshop ianao.
Ny fiakaran'ny typography feno fahasahiana
Mbola tsy hainao ny mampiasa typografia feno fahasahiana amin'ny asanao, aza manahy, hazavainay ny toerana sy ny fomba fampiasana an'io variana io.
inona no atao hoe sketch
Fantatrao ve ny atao hoe sketch? Fantaro ny dikan'izany, ny karazana misy ary ny maha-ilaina azy, ary ianaro ny fomba fanamboarana kalitao.
Ahoana ny fomba fanaovana gradient amin'ny loko
Raha tsy hainao ny manao gradient loko ao amin'ny Illustrator, ato amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava azy tsikelikely izahay.
Ampahany amin'ny logo
Azo antoka fa fantatrao ny atao hoe logo, saingy fantatrao ve ny ampahany amin'ny logo? Fantaro ny fomba hanasana logo iray ary omeo anarana ny ampahany tsirairay mandrafitra azy
Fitsipiky ny famolavolana sary
Fantatrao ve hoe inona ny fitsipiky ny famolavolana sary? Fantaro hoe inona izy ireo ary nahoana izy ireo no zava-dehibe mba hamoronana ny fototry ny famolavolana.
Ahoana no ahafantarako ny Pantone amin'ny loko iray?
Raha te hanontany tena ianao hoe ahoana no ahafantarako ny Pantone amin'ny loko iray, ato amin'ity lahatsoratra ity dia hazavainay ny fomba hahitanao azy.
Ahoana no hanaovana board mood
Raha mbola manontany tena ianao hoe ahoana no fomba handrafetana moodboard tonga lafatra, ato amin'ity lahatsoratra ity dia hazavainay aminao amin'ny dingana tsotra izany mba hahafahanao mamolavola ny tsara indrindra.
izay namorona youtube
Fantatsika rehetra ny atao hoe YouTube fa vitsy no mahalala ny nahatonga izany. Amin'ity lahatsoratra ity, manazava ny tantarany sy ny fivoarany lehibe ao amin'ny Internet izahay.
Ny endri-tsoratra geometrika tsara indrindra
Raha mitady endri-tsoratra geometrika ho an'ny tetikasa famolavolanao manaraka ianao, ato amin'ity lahatsoratra ity dia misafidy ny tsara indrindra izahay.
Ahoana ny famoronana rakitra SVG
Raha mbola tsy fantatrao ny fomba hamoronana rakitra SVG ao amin'ny Illustrator, amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny dingana rehetra tokony harahinao.
Ny endri-tsoratra Montserrat dia nampiasaina tamin'ny sehatry ny famolavolana nandritra ny taona maro. Ato amin'ity lahatsoratra ity, dia manazava ny fomba sy ny toetra ankapobeny indrindra.
tantaran'ny logo batman
Raha mpankafy tantara DC ianao dia tsy afaka manadino ity lahatsoratra ity izay hanazavanay ny tantaran'ny logo Batman.
Ny tsara indrindra sary retouching fandaharana
Raha mpankafy sary ianao ary tsy fantatrao hoe iza amin'ireo programa retouching sary ampiasaina, ato amin'ity lahatsoratra ity isika dia hiresaka momba ny tsara indrindra.
fika hanaovana sary
Raha liana amin'ny tontolon'ny sary ianao dia ho hitanao fa mahaliana ny mahafantatra ny sasany amin'ireo fika tsara indrindra amin'ny fanaovana sary. Amin'ity lahatsoratra ity dia hilaza aminao izahay.
Raha liana amin'ny fanitsiana horonan-tsary ianao dia tsy azonao adino ity lahatsoratra ity izay atoronay anao ny toerana hahazoana modely After Effects.
Inona ny tantaran'ny logo Google?
Te hahafantatra ve ianao hoe inona no ao ambadiky ny tantaran'ny logo Google? Amin'ity lahatsoratra ity dia mamaha ny fisalasalanao rehetra izahay.
Illustrators Galician tsara indrindra
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia manolotra fifantenana amin'ireo mpanao sary Galisiana mpitarika eo amin'ny tontolon'ny sary an-tànana izahay.
Fitsipika Gestalt amin'ny famolavolana sary
Raha te hahafantatra ianao hoe inona ireo fitsipika enina an'ny Gestalt amin'ny famolavolana sary, ity lahatsoratra ity dia hamaly ny fanontanianao rehetra.
psikolojia ny typography
Betsaka ny karazana endri-tsoratra, saingy tsy fantatsika izay ampitainy. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia manazava ny atao hoe psikolojia ny typography.
Raha nanana fisalasalana ianao momba ny rafitra fanontam-pirinty mety kokoa amin'ny tetikasanao. Amin'ity lahatsoratra ity, omenay anao ny fanalahidy ilaina hamahana azy ireo.
Inona no karazana endrika sary misy?
Mahita karazana endrika sary maro isika, ary ato amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny endrika sary lehibe misy isika.
Ahoana ny fametrahana borosy amin'ny Photoshop
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hanome anao torohevitra vitsivitsy momba ny fomba hanampiana borosy amin'ny Photoshop haingana sy mora.
Tantaran'ny logo Chanel
Raha te-hahafantatra izay ao ambadiky ny tantaran'ny logo Chanel ianao, ato amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitanao izany.
Inona no programa fanovana video tsara indrindra?
Misy safidy maro rehefa misafidy fandaharana fanovana horonan-tsary, ato amin'ity lahatsoratra ity dia misafidy ny tsara indrindra isika.
Inona no atao hoe visual metonymy?
Raha liana amin'ny fampiasana metonymy hita maso amin'ny tetikasa famolavolanao ianao, amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny zava-drehetra momba ity loharano ity.
Ny tantaran'ny logo Kia
Fantatsika ny fiantraikan'ny Kia ho marika eo amin'ny sehatry ny fiara, saingy tsy fantatrao ny tantarany. Amin'ity lahatsoratra ity dia hazavainay aminao izany.
Raha tia fanoharana nomerika ianao, ary tianao ny hampianatra anao ny fomba fanaovana sary amin'ny Procreate tsikelikely, ity lahatsoratra ity dia ho anao.
ny fomba hanaovana cinemagraph
Raha mbola tsy hainao ny teknika cinemagraph dia vintana ianao. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia hazavainay hoe inona io teknika io sy ny fomba hanaovana izany.
Gazety famolavolana sary tsara indrindra
Raha toa ka santionany amin'ny gazetiboky famolavolana izay ananan'ny mpamorona ho fanondroana no tadiavinao, ity ny lahatsoratrao.
Inona ny endri-tsoratra Netflix?
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny famolavolana ny typography Netflix vaovao sy ny fomba fifandraisany isika.
Inona ny effet parallax
Misy fiantraikany amin'ny maso izay miteraka fanilikilihana sasany. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka aminao momba ny vokatry ny parallax sy ny toetrany.
Ohatrinona ny vola azon'ny mpamorona sary any Espaina
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia hahita fampahalalana momba ny vola azon'ny mpamorona sary any Espaina ianao ary inona no tokony hataonao mba ho iray.
Ahoana ny fomba hisintonana horonan-tsary Tik Tok tsy misy Watermark
Manelingelina anao ve ny mari-drano? Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehoy anao ny lesona tsotra hanalana tasy rano amin'ny fomba mora sy tsotra.
Psikolojia ny endrika amin'ny endrika sary
Ato amin'ity lahatsoratra ity ianao dia hahita famakafakana ny psikolojia ny endrika sy ny fifandraisany amin'ny endrika sary.
stereotypes amin'ny dokam-barotra
Teo amin'ny fiaraha-monina misy antsika dia nisy foana ny stereotype izay nisy fiantraikany tamin'ny haino aman-jery dokam-barotra. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao izy ireo.
Ahoana ny fomba hanaovana infografika
Raha miezaka manao infografika ianao nefa tsy mety aminao dia omenay anao ny dingana mba hahafantaranao ny fomba fanaovana infografika mahomby.
Ahoana ny fametrahana boky
Asehonay anao ny dingana hianarana ny fomba fandrafetana mora ny boky iray ary diniho ny antsipiriany izay hahatonga azy io ho miavaka.
Raha manokan-tena amin'ny famolavolana tonian-dahatsoratra na famolavolana sary ianao nefa mbola tsy azonao ny fomba famolavolana bokikely. Amin'ity lahatsoratra ity dia hazavainay aminao izany.
Ahoana ny fitadiavana sary tsy misy background amin'ny Google
Efa nila endrika PNG maika ve ianao nefa tsy fantatrao ny fomba hahitana azy? Ato amin'ity lahatsoratra ity dia manazava ny fomba hanaovana izany mora foana.
Raha mitady iPhone X mockups ianao dia vintana. Eto ianao dia hahita fanangonana modely ho an'ny iPhone X.
Raha manokan-tena amin'ny famolavolana sary ianao dia tena zava-dehibe ny efijery solosainao. Ahoana anefa no hisafidianana monitor ho an'ny famolavolana sary? Manampy anao izahay.
Misy sary izay mitarika antsika amin'ny fomba iray amin'ny alàlan'ny singa. Ato amin'ity lahatsoratra ity, hasehontsika anao ny atao hoe sary schematic.
Iray amin'ireo endri-tsoratra be mpampiasa indrindra manerantany ny Arial. Eto aho dia milaza aminao kely ny tantarany.
Karazana sary japoney fahiny
Raha liana amin'ny zavakanto sy fanoharana japoney ianao dia vintana. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia hasehontsika anao ny atao hoe sary japoney sy ny ohatra.
Raha mpankafy ny kiraro malaza Vans ianao, eto izahay dia milaza aminao momba ny fiandohana sy ny tantaran'ny logo Vans.
Tsy mahay manao bokikely? Omentsika anao ny fanalahidy sy ny dingana tokony hataonao mba hamoronana iray mora foana.
Raha liana amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena ianao ary mbola tsy fantatrao hoe aiza no hanombohana ny famolavolanao voalohany, amin'ity lahatsoratra ity dia hampiseho ohatra vitsivitsy aminao izahay.
sary famantarana famantarana
Misy marika marika sary mora fantarina. Amin'ity lahatsoratra ity dia asehoy anao ny sasany amin'ireo hevitra tsara indrindra hamolavola ny anao.
Ahoana ny fomba fanaovana fonon-gazety famoronana
Ny famolavolana gazety dia mety ho sarotra kely fa ny fanaovana azy araka ny tokony ho izy dia sarotra kokoa, ato amin'ity lahatsoratra ity isika dia manazava ny fomba hanaovana izany.
Tantaran'ny logo Amazon
Ny fahafantaranao ny tantara ao ambadiky ny famantarana ny Amazon dia afaka manampy anao hahatakatra bebe kokoa ny filozofian'ny orinasa. Miditra.
Ahoana ny fomba hamoronana emoji avy amin'ny sary
Amin'ity torolàlana ity dia asehonay anao ny fampiharana sy toro-hevitra tsara indrindra hamoronana emoji avy amin'ny sary tokana amin'ny findainao.
Karazana endrika sary
Fantatrao ve hoe firy ny karazana endrika sary misy? Raha ny marina dia misy maro fa holazainay aminao ny zava-dehibe indrindra amin'ny rehetra.
Ohatra amin'ny famolavolana editorial
Rehefa miresaka momba ny famolavolana editorial isika dia miresaka momba ny boky, gazety na bokikely. Amin'ity lahatsoratra ity dia mampiseho ohatra mahazatra kokoa aminao izahay.
Inona no atao hoe html6?
Ny dikan-teny vaovao amin'ny HTML5 dia manakaiky ny famoahana. Eto izahay dia milaza aminao bebe kokoa momba ny HTML6 sy ny fiovany.
Inona no atao hoe famolavolana sary?
Efa nanontany tena ve ianao hoe natao inona ny famolavolana? Ato amin'ity lahatsoratra ity dia manazava ny tena asa sy ny antony maha-zava-dehibe izany
Knolling: inona izany
Efa naheno momba ny knolling ve ianao? Inona ity? Fantaro hoe manao ahoana ity teknika fakana sary ity ary ahoana no ahafahanao manao izany.
bokikely manome fahalalana
Tena hita eo amin'ny fiaraha-monina misy antsika ny bokikely manome vaovao. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehoy anao ny ohatra sasantsasany amin'ireo bokikely malaza indrindra
Inona no atao hoe serif typeface ary oviana no ampiasaina?
Azo antoka fa efa naheno ianao fa misy endritsoratra misy endritsoratra serif, ireo dia endritsoratra serif. Eto izahay dia milaza aminao bebe kokoa momba azy ireo.
Logo responsive: inona izany ary ahoana no hanaovana azy
Ny fampifanarahana amin'ny teknolojia vaovao koa dia mitaky anao hampifanaraka ny marikao. Hazavainay eto ny atao hoe logo responsive sy ny fomba hanaovana azy.
Eto izahay dia manolotra fitambarana 5 amin'ireo fanentanana dokam-barotra tsara indrindra izay horaketina ao amin'ny retinanao.
Fantatrao ve fa afaka mampihatra andian-dahatsary amin'ny sarinao ianao ary mamadika azy ireo ho fanoharana? Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehoy anao ny toerana hahazoana azy.
Raha mpankafy ny sarimiaina sy fantasy malaza koa ianao, dia tsy azonao adino ny tantarany manan-danja sy ny fivoaran'ny marika.
Ahoana ny fandefasana Procreate brushes
Raha liana amin'ny borosy miteraka ianao dia tsy azonao adino ity lahatsoratra manaraka ity izay hanazavantsika ny fomba sy ny toerana hisintonana azy ireo.
Ianaro ny maha-zava-dehibe ny famolavolana sary sy ny fiantraikan'izany eo amin'ny tontolon'ny Marketing.
Ahoana ny fanovana ny endri-tsoratra ao amin'ny Instagram
Ny fanovana endritsoratra Instagram dia toa asa tsy azo atao foana. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehoy anao ny fampianarana misy dingana tsotra.
Fitaovana ho an'ny famolavolana sary
Eto izahay dia mitondra anao ireo fitaovana famolavolana sary izay ilain'ny mpamorona rehetra hanombohana ny asany eto amin'ity tontolo ity.
Ahoana ny fizarana horonan-tsary ho fizarana maromaro
Raha manokan-tena amin'ny fanitsiana horonan-tsary ianao, dia tsy ho diso ity fampianarana manaraka ity izay hanazavantsika ny fomba fizarana horonan-tsary ho fizarana maromaro.
Ny gazety dia iray amin'ireo haino aman-jery be mpampiasa indrindra amin'izao fotoana izao. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehontsika anao ireo hevi-dehibe hamolavolana azy.
Raha te hanao sary 3D foana ianao nefa tsy fantatrao ny fomba hanaovana izany sy ny toerana hanombohana. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehoy anao ny programa 3D sasany.
Raha te hanana references hita maso tsara ianao dia tsy maintsy mahafantatra ireo mpamorona sary manan-danja indrindra amin'ny tantara. Eto izahay dia asehoy anao.
Ahoana ny fomba hanaovana ny fonony
Raha te hamolavola fonony foana ianao ary tsy fantatrao hoe aiza no hanombohana, amin'ity lahatsoratra ity dia hasehontsika anao ny fomba hanaovana izany amin'ny fanarahana dingana vitsivitsy.
Ny isotypes dia manampy ny marika hanana fisiana lehibe kokoa ao an-tsain'ny mpampiasa. Hazavainay anio hoe inona izy ireo ary omenay ohatra vitsivitsy.
Raha ny sehatry ny fanontam-pirinty no tianao, dia tsy azonao adino ity lahatsoratra novolavolainay ity izay hampahafantaranay anao ny flexography
Raha mbola tsy fantatrao ny atao hoe Corel Draw, ato amin'ity lahatsoratra ity dia hasehonay anao karazana torolàlana ahafahanao mianatra bebe kokoa momba an'io rindrambaiko io.
Ny ankamaroan'ny fotoana dia avy amin'ny mpanakanto hafa ny aingam-panahy. Eto izahay dia mitondra anao lisitry ny mpanao sary malaza.
Ny litera gothic dia misy foana na dia ankehitriny aza dia efa nohavaozina. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia manazava ny fomba famolavolana azy ireo izahay.
Anisan'ireo lafin-javatra isan-karazany ao amin'ny famolavolana, dia hitantsika ny endrika brutalist. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia hazavainay hoe inona io ankehitriny io.
Ianaro ny fomba hanesorana ny lafin'ny sary iray ao amin'ny Word amin'ny dingana 3 mora miaraka amin'ny fitaovana fanesorana lamosina. Aza adino ity lahatsoratra ity!
Ny fampiharana paikady ara-barotra tsara dia mety hitondra fiovana amin'ny orinasa hafa. Hazavainay eto ny atao hoe debranding.
Inona no atao hoe endrika sary dizitaly? Inona no maha samy hafa azy amin'ny mpamorona sary nentim-paharazana? midira fa hazavainay aminao ny zava-drehetra.
Mety ho asa sarotra ny famolavolana haino aman-jery ivelan'ny aterineto toy ny bokikely. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia manazava ny fomba famolavolana azy.
Mba hanaovana fanelanelanana dia mila fakantsary na finday ihany ianao. Hazavainay eto ny fomba fanaovana lapse.
Ahoana ny fomba fanaovana sticker amin'ny WhatsApp
Te hianatra ny fomba fanaovana sticker ho an'ny WhatsApp ve ianao? Manazava fomba roa hanaovana izany izahay ary manome anao safidy hafa. Fantaro izy ireo!
Eto isika dia hanazava ny atao hoe risography, teknika fanontana vaovao tsy dia fantatra nefa tena mahaliana.
Mora foana ny manapaka sary. Ny tsy ho fantatrao dia ny ahafahanao manao izany amin'ny fomba samihafa. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia manazava ny fomba.
Asio lahatsoratra amin'ny sary
Azo atao foana ny mampiditra azy amin'ny fanohanana sary samihafa. Amin'ity lahatsoratra ity dia hazavainay ny fomba hanaovana izany amin'ny fampiasana sary.
Raha efa nieritreritra ianao fa fantatrao ny zava-drehetra momba ny endrika GIF, ato amin'ity lesona ity dia asehoy anao ny dingana, izay ahafahanao manapaka GIF mora foana.
Ny masoivohon'ny famolavolana malaza indrindra any Espaina
Te-hahafantatra hoe iza amin'ireo masoivoho famolavolana manan-danja sy malaza indrindra any Espaina ve ianao? Fantaro hoe inona ny references azonao.
Karazana famolavolana sary
Fantaro ireo karazana endrika sary izay ahafahan'ny orinasa sy ny marika manome lanja ny vokatra, serivisy na tetikasany.
Hanesorana lahatsoratra avy amin'ny sary
Raha mila maka lahatsoratra amin'ny endrika JPG ianao, ato amin'ity lesona ity dia hazavainay ny fomba hanaovana izany amin'ny dingana tsotra.
Programa famolavolana sary
Raha mpamorona ianao ary mbola tsy fantatrao izay fitaovana hamolavolana. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia hamaha ny olana amin'ny ohatra vitsivitsy.
Ahoana ny famolavolana logos famoronana
Raha mpamorona ianao, dia ho liana amin'ny fahafantarana ireto torohevitra atolotray anao ireto, momba ny fomba famolavolana logo mamorona sy miasa.
Ahoana ny fanovana sivana amin'ny Tik Tok
Ny sivana Tik Tok dia iray amin'ireo fitaovana ampiasain'ny mpampiasa indrindra. Amin'ity lahatsoratra ity dia manazava ny fomba hanovana azy ireo tsikelikely.
Ahoana ny fomba fanaovana afisy
Raha liana amin'ny tontolon'ny afisy mihetsiketsika sy famoronana ianao, ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehoy anao ny toro-hevitra vitsivitsy hanamboarana afisy tsy manam-paharoa.